Somaliland: “Doorasho Dambe Oo Dimuqraadiyad Kaga Qabsoonta Somaliland Waxay Meesha Ka Saari Doontaa In La Iska Indho Tiro Aqoonsigeeda” - Wargane News
Home Somali News Somaliland: “Doorasho Dambe Oo Dimuqraadiyad Kaga Qabsoonta Somaliland Waxay Meesha...
“Baasaboorka Somaliland waxa laga ogolaaday dalal ku yaalla Afrika, Yurub Iyo Maraykanka….”
Majallada Daily Maverick oo Warbixin ku Bayaamisay Dhacdooyinka Somaliland Kaga Duwan Tahay Dalal ku Yaalla Mandaqadda….
Majalladda Daily Maverick oo fadhigeedu yahay johannesburg, South Africa,ayaa Jamhuuriyadda Somaliland ka qortay warbixin dheer oo ay kaga hadashay xaaladda Somaliland, waxaanay qormadeeda ciwaan uga dhigtay “Dekadda cusubi ma wax ma ka bedalaysaa mustaqalkii dalka?.”
Warbixinta Daily Maverick, waxa lagu sheegay in Somaliland ay caalamka ka iibiso nabad-gelyadda iyo deganaanshaha oo labaduba ku yar mandaqadda ay ku taallo. Warbixintan waxa soo akhriyay ka dibna warkan ka soo turjumay Tifaftiraha guud ee wargeyska DAWAN Cumar Maxamed Faarax.
“Himilladda Somaliland ee mashruuca heshiiska dekadda Berbera ee DP World, waxa laga yaabaa inuu xoojiyo in dib looga fikiro mustawaha iyo kaalinta Somaliland oo ah mid iibgeynaysa nabadgelyadda iyo deganaanshaheeda oo labaduba ah wax ku yar mandaqadda ay ku taallo.
DP World, ayaa heshiis 30 sannadood ah oo ku wajahan dekadda dalka la gashay Somaliland. Somaliland waxay xornimadeeda ka qaadatay Ingiriiska sannadkii 19960-kii waxase ay ku biirtay Somalia. sannadkii 1991 ayay Somaliland dib u heshay xornimadeedii markii ay dhacday dawladdii Soomaaliya.
25-kii sannadood ee ay xornimadeeda la soo noqotay ma jirto cid u aqoonsatay qaran madax banaan. Inkasta oo ay ku taallo gobolka qalalaasaha, haddana waxay Somaliland leedahay dimuqraadiyad shaqeynaysa oo taabo-gal ah, waxa ka qabsoomay doorashooyin. Waxay leedahay xisbiyo mucaarid ah iyo saxaafad madax-banaan.Heshiiskan cusub ee dekaddu waa kii u weynaa ee ay heshay tan iyo markii ay madax-banaanideeda ku dhawaaqday.
Waxa ka jira caasimadda Somaliland ee Hargeysa yididiillo ay quudareynayaan camirnaan iyo xarakaad dhinaca ganacsiga ah laga dareemi doono Berbera iyo Hargeysa. Sidoo kale waxay rejaynayaan in isku xidhka ganacsigu uu badhi taari doono aqoonsi raadintooda.
Baasaboorka Somaliland waxa laga ogolaaday dalal ku yaalla Afrika, Yurub iyo Maraykanka, waxaana jira duulimaadyo toos ah oo ka yimaada Hargeysa oo taga Dubia, Nairobi iyo Addis-ababa. Dalkan (Somaliland) waxa uu leeyahay ciidan boolis ah iyo laamaha kale ee ammaanka oo u gaar ah, waanay ka nabad-gelyo wanaagsan yihiin qaar ka mid ah dalalka jaarkooda sida Soomaaliya.
Kama furna safaarado magaaladda Hargeysa, laakiin dalal ayaa ku leh xafiisyo daneed, danjireyaal fadhigoodu yahay Addis-ababa iyo Nairobi ayaa yimaada Hargeysa si ay wada hadallo ula yeeshaan dawladda Somaliland.
Waxa Somaliland ahmiyad weyn u leh doorashooyinka ay qabanayaan sannadka fooda innagu soo haya ee 2017-ka. Doorashadii Somaliland ka dhacday sannadkii 2010-kii, waxa lagaga guulaystay xisbigii talladda hayay oo awoodii si nabad-gelyo ah ugu wareejiyay xisbigii ka adkaaday. Doorasho dambe oo dimuqraadiyad iyo hufnaan kaga qabsoonta Somaliland ayaa meesha ka saari doonta in la iska indho tiro aqoonsi raadinteeda.”